မြန်မာသံတော်ဆင့်: August 2012
ရခိုင်အရေးနှင့်ပါတ်သက်၍သမတကြီးဦးသိန်းစိန်နှင့် VOA အမေရိကန်
ချုပ်ထားနိုင်ခြင်း (keeps under control, at least for the moment) ဖြစ်သည်။
ထို့ ပြင်သူတို့ ကိုယ်သူတို့ ရိုဟင်ဂျာဟုအမည်တပ်နေကြသူများကိုသမတကြီးကိုယ်တိုင်က
“ဘင်္ဂလီများ” ဟုအတိအလင်းအမည်တပ်ခေါ်ဝေါ်သွားသည်မှာလည်းသူတို့ ၏တကယ့် လူမျိုးရင်းမြစ်ကိုအမှန်အတိုင်းခေါ်ဝေါ်ရာရောက်သဖြင့်ကျေနပ်စရာကောင်းပါသည်။
“လူမျိုးရေးကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ် - ဘာသာရေးကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်
(immigration issue) ကိုရင်းမြစ်ပြဿနာအဖြစ်ထောက်ပြမသွားပါ။
ထို့ နောက်သမတကြီးကလူ့ အခွင့်အရေး၊ ‘လူသားအမြင်’‘ကမ္ဘာ့ရွာကြီး’ဆိုသောခေတ်ပေါ်
များ (connotations) သည်မြန်မာခေါင်းဆောင်ကြီးအပေါ်တစုံတရာသြဇာ
ထို့ ကြောင့်ပင်“ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများကိုကျနော်တို့ ကစကားဆယ်ခွန်းဆယ့်ငါးခွန်းပြောတာထက်
ကိုရခိုင်များသာမက၊မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးကစိတ်ပျက်နေခဲ့ကြသည်-ဥပမာ ဘီဘီစီ-အင်နာဂျုံးကိစ္စ။ လက်တွေ့ တွင်ပြည်ပမီဒီယာ၏သြဇာကိုပြည်တွင်းမီဒီယာကတဖြည်းဖြည်းဖယ်ရှားလာနေပြီဖြစ်သည်။]
ဘာတွေများမှားနေလို့ လဲမေးစရာဖြစ်နေသည်။အခြားနိုင်ငံများတွင်တရားမ၀င်ခိုးဝင်လာသူတွေ ကိုဒေသခံတွေကအနိုင်ကျင့်တတ်ကြသည်မှာသဘာဝဖြစ်သည်။
ရခိုင်တွေသည် သူတို့ နှင့်အတူယှဉ်တွဲရောနှောနေထိုင်ခဲ့ဘူးသည်။
သူတို့ ဆီကဈေးဝယ်စားသည်။သူတို့ ကိုငှားရမ်းခိုင်းစေခြင်း
(Antonio Guterres) ကိုပြောလိုက်သောအခါရခိုင်ပြည်သူတွေကချီးကျူးကြ၊ပြည်ထောင်စုအလံတွေထူကြဖြင့်သဘောထားပြတ်ပြတ်သားသား
သို့ ရာတွင်သမတကြီးအစိုးရသည်ပြဿနာပိုကြီးထွားကျယ်ပြန့် မလာအောင်ထိမ်းချုပ်နိုင် သည့်တိုင်အခြားရေရှည်ပြဿနာများကိုကားဆက်လက်၍ရင်ဆိုင်သွားရဦးမည်ဖြစ်သည်။
၄င်းတို့ မှာ- ပြည်ပကတောင်းဆိုနေသောသီးခြားလွပ်လပ်သောစုံစမ်းရေး
အဖွဲ့ ခွင့်ပြုပေးရေးကိစ္စ- ဒေသခံရခိုင်များကစီးပွားရေးအရမဆက်ဆံတော့သဖြင့်
လူဦးရေတိုးနှုံးပေါက်ကွဲနေမှုအားလူ့ အခွင့်အရေးမထိခိုက်စေဘဲထိမ်းချုပ်ရမည့်ကိစ္စ -
လူတွေပါလာမည့်) အဖွဲ့ မျိုးကိုဆိုလိုဟန်တူသည်။ယခုအခါအစိုးရကပြည်တွင်းမှ
ပုဂ္ဂိုလ် (၂၇) ဦးဖြင့်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဖွဲ့ စည်းပေးလိုက်သည်။
ထို့ ပြင်မည်မျှသမာသမတ်ကျသောပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့်ဖွဲ့ စည်းသည်ဖြစ်စေ
ခန့် ပြည်တွင်းဖြစ်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ကို discredit လုပ်ရန်အဓိကရထိုင်းတက္ကသိုလ်
(humanitarian aspects) ကိုအသားပေးကာထိုးနှက်လာပေတော့မည်။
အခုမှအစသာရှိသေးကြောင်းလူသိများလာအောင် publicity လုပ်မည့်အချက်ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘောဒီးယားကအလှည့်ကျဥက္ကဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်နေသော ASEAN အဖွဲ့ က “ရိုဟင်ဂျာ”ကိစ္စဆွေးနွေးရန်ခေါင်းစဉ်တင်သည်ကိုမြန်မာကပြည်တွင်းရေး
အကြောင်းပြချက်ဖြင့်ပါယ်ချခဲ့သည်ဟုသိရသည်။ စင်စစ်အိုအိုင်စီ (OIC)၏
ASEAN initiative ကိုလက်မခံနိုင်စရာမရှိ။
သို့ သော်သမတကြီးအလေးထား၍ပြောသွားသည်များအနက်သူတို့ အား
သူတို့ ကိုဤအခွင့်အရေးမပေးသင့်ဟုမပြောလို။သို့ သော်ပေးမည်ဆိုလျှင်
ထို့ ကြောင့်သူတို့ ကိုပညာသင်ရေးမစမီသူတို့ တစ်ဦးချင်းစီ၏အဆင့်အတန်း (status
သည်ဘာလဲ၊ တရားမ၀င်ရောက်လာသူလား (illegal migrant) နိုင်ငံသားလောင်း
(potential citizens)တွေလားအလျင်ကွဲကွဲပြားပြားသတ်မှတ်ထားသင့်ပါသည်။ တရားမ၀င်ခိုးဝင်လာကြောင်းထင်ရှားသူများကိုဘယ်လောက်ကြာကြာ
နေပြီးဖြစ်ပါစေပညာသင်ပေးစရာမလို။ Immigration Detention Camps
သို့ ပို့ မြန်မာနိုင်ငံ၏ဥပဒေအတိုင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားရန်သာရှိသည်။
သို့ ရွှေ့ ပြောင်းခြင်းဖြင့်လူစုခွဲသင့်သည်။သို့ မှသာလက်တွေ့ ပညာသင်ပေးဘို့ လွယ်ကူလိမ့်မည်။ နိုင်ငံတကာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်းလည်းဖြစ်ပါသည်။ အမေရိကန်၊ကနေဒါ၊ သြစတျေးလျ
စသောmajor accepting countriesများတွင်ဝင်ခွင့်ရသူများကိုတိုင်းပြည်နေရာအနှံ့ အပြား
တွင်ဖြန့် ၍နေရာချထားသည်။တနေရာတည်းမှာစုမထား။ဤသို့ နေရာချ
ထားပေးပြီးမှ English asaSecond Language (ESL)ကိုသင်ကြားပေးသည်။
ထို့ ကြောင့်စားနပ်ရိက္ခာနှင့်ဆေးဝါးကျမ္မာရေးကိစ္စများအတွက်ပြောစရာမရှိသော်လည်း ပညာသင်ကြားရေးကိစ္စကိုရှုဒေါင့်စုံမှအသေအချာတွက်ချက်ပြီးမှစီစဉ်သင့်ပါသည်။
လက်တွေ့ သဘောအရနိုင်ငံသား (de facto citizenship)အဖြစ်သတ်မှတ်ထားရာ
သမတကြီးကြေငြာထားပြီးသားအချက်ဖြစ်သည့် ၁၉၄၈ ခုနှစ်မတိုင်မီကရောက်နှင့်နေ သူများ၏မြေးမျိုးဆက်ကိုလက်ခံမည်ဆိုသည့်အချက်အရလူအနည်းဆုံး၂သိန်းလောက်
ဆန့် ကျင်ကြသည်။ အာဖဂန်နစ္စတန်တွင်မိန်းခလေးစာသင်ကျောင်းများကို
ထို့ ကြောင့်သူတို့ ကိုပညာသင်ပေးမှဖြစ်မည်ဆိုလျှင်ပြည်တွင်းနေမြန်မာမူဆလင်
မသုံးချင်၍INGO များထံလွှဲပေးမည်ဆိုလျှင်၎င်းတို့ ကမြန်မာနိုင်ငံ၏အမျိုးသားအကျိုးစီးပွား
(national interest)နှင့်ဆန့် ကျင်မည့်သင်ကြားမှုမျိုးများမလုပ်ကြဟုမပြောနိုင်ပါ။
(တနိုင်ငံလုံးဖျမ်းမျှ တိုးနှုံးသည် ၂.၂ % ဟုထင် ပါသည်)။ ထို့ ကြောင့်လူဦးရေများသော
မိသားစုများတွင်ကာယကံရှင်များကမိမိတို့ အသိဖြင့်မကန့် သတ်လျှင်အစိုးရကဖြစ်သည့်နည်းဖြင့်
ကန့် သတ်ပေးဘို့ ဖြစ်သည်။ (Eugenic/ forced neutering)
ဘင်္ဂလီများမြန်မာနိုင်ငံထည်းစိမ့်ဝင်လာခြင်းသည်တစ်ဘက်နိုင်ငံမှလူဦးရေပေါက်ကွဲမှု၏ အကျိုးဆက်ဖြစ်ရာမြန်မာနိုင်ငံထည်းတွင်ဆက်လက်ပေါက်ကွဲမှုအဖြစ်မခံနိုင်ပါ။ အမျိုးသားလုံခြုံရေးကိုချိမ်းချောက်မှု (national security threat) ဆိုနေသည်မှာ ဤအချက်ကိုဆိုလိုပါသည်။ ဤသို့ ကိုင်တွယ်ရာ၌လူ့ အခွင့်အရေးစံတစ်ခုခုနှင့်
ရလိမ့်မည်။သူတော်စင်များအဖို့ သီလစင်ကြယ်ဖို့ ကအဓိကဖြစ်ချင်ဖြစ်မည်၊
(Saints can be pure but statesmen must be responsible.)
ရခိုင်အရေးသည်မြန်မာအစိုးရသစ်၏နိုင်ငံရေးခွန်အား(political strength) ကိုပြည်တွင်းပြည်ပမျက်နှာစာနှစ်ခုစလုံးမှာစာမေးပွဲစစ်လိုသလိုဖြစ်နေသည်။ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရခေါင်းဆောင်သောဒီမိုကရေစီမြန်မာနိုင်ငံတော်သစ်သည် ပထမကမ္ဘာစစ်အပြီးစစ်ရှုံးဂျာမဏီတွင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သောဝေမာသမတနိုင်ငံ
(Weimer Republic, 1919-1933) ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသောအခြေအနေမျိုးနှင့်
ပေးရန်စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှု (commitment) လည်းရှိခဲ့ကြသည်။
သို့ သော်စစ်ရှုံးဂျာမဏီ၏နိုင်ငံတကာသို့ ပြုရမည်ဝတ္တရားများ (international obligations) များကမချိမဆန့် ကြီးမားခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်ဗာဆိုင်းစာချုပ်အရစစ်နိုင်သူများသို့ ပေးရမည့် စစ်လျှော်ကြေးများကအလွန်တရာလေးလံလှပြီးပြည်တွင်းတွင်လည်း ၀ဲ-ယာအစွန်းရောက်နိုင်ငံရေး အင်အားစုများကလည်းမဖြစ်နိုင်သောတောင်းဆိုချက်များကြွေးကျော်သံများဖြင့်အစိုးရကိုဘေး ကြပ်နံကြပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ကြသည်။ ရလဒ်မှာအပြောအဟောကောင်းသောအစွန်းရောက် အမျိုးသားရေးဝါဒီဟစ်တလာနောက်သို့ လူထုကစုပြုံလိုက်သွားကြခြင်းဖြစ်သည်။
စစ်အာဏာရှင်နောက်ခံရှိနေသောမြန်မာအုပ်စိုးသူများ၏နိုင်ငံတကာသို့ တင်ရှိနေသော ၀တ္တရားမှာဝေမာသမတနိုင်ငံလိုနိုင်ငံခြားကြွေးမြီများတော့မဟုတ်။ မိမိ၏အတိပ်အာဏာ
သည်လူမျိုးသန့် စင်ရေး (ethnic cleansing) မဟုတ်ဟူသောဝါရှင်တန်၏
ထောက်ခံချက်ကိုရနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Jihad ဖြင့်ချိမ်းချောက်နေမှုလည်း (လောလောဆယ်တော့)ဆက်လက်၍အသံမမည်ဘဲရပ်သွားစေသည်။
ထို့ ကြောင့် So far, so good ဟုမှတ်ချက်ပြု ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
သို့ ရာတွင်အာဏာရှင်စံနစ်ကြီးကြောင့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးမပြိုကွဲယုံတမယ်ယိုယွင်းနေပြီး လက်နက်ကိုင်အင်အားစုများသည်ကိုယ့်နယ်နှင့်ကိုယ်ဗဟိုအစိုးရနှင့်စင်ပြိုင်ရှိနေကြတုံးဖြစ်သည်။
တဘက်တွင်မြေမရှိသောဘင်္ဂလီများကမြန်မာပြည်ထည်းစိမ့်ဝင်နေသကဲ့သို့ အခြားတဘက် တွင်အလုပ်လက်မဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားများကတိုင်းပြည်ကိုစွန့် ခွာ၍အလုပ်အကိုင်ရှိရာများသို့ထွက်ခွာသွားနေကြသည်။ သမတကြီးဦးသိန်းစိန်အစိုးရသည်ဤကျဆင်းလာနေသောနိုင်ငံတော်
(Failing state) ကို အချိန်မှီယုံက လေးလွှဲပြောင်းယူရခြင်းဖြစ်သည်။ ဤချိနဲ့ မှုသည်လျှို့ ဝှက်ချက် မဟုတ်ပဲလူတိုင်းမြင်နိုင်သဖြင့် “ရိုဟင်ဂျာသမတနိုင်ငံ”ထူထောင်လိုသူများကအခွင့်ကောင်းယူ
တာဖြစ်သည်။ ထို့ ကြောင့်ကျောက်နီမော်ကိစ္စပေါ်သည်ဖြစ်စေမပေါ်သည်ဖြစ်စေတနည်း
ချီတက်နေတဲ့ခရီးမှာ“မမျှော်လင့်ဘဲ”ကြုံတွေ့ လာတဲ့အခက်အခဲတစ်ခု”ဟုပြောဆိုခြင်း သည်နားထောင်ရသူတွေစိတ်ဧအောင်တမင်လျှော့ပေါ့၍ပြောခဲ့သည်ဟုသာဆိုချင်ပါသည်။
ထို့ ကြောင့် ဤ “ရိုဟင်ဂျာပြဿနာ”ကိုအချိန်ှမှီအပြီးသပ်မဖြေရှင်းနိုင်လျှင်တစ်ချိန်ချိန်တွင်
ဘင်္ဂလားဒက်ရ်ှနိုင်ငံနှင့်ထိပ်တိုက်တွေ့ ရဘို့ ဖြစ်လာနိုင်သည်။အဘယ့်ကြောင့်
ရှင်းနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့ စဉ်လျှက်သူ့ တိုင်းပြည်ကလူသုံးသိန်း ကိုမြန်မာနိုင်ငံကလူတွေအဖြစ်လက်ခံဘို့ တောင်းဆိုနေသည်။ ထိုလူတွေကို အစာရေစာပြတ်စေလျှက်မြန်မာပြည်ထည်းပြန်သွားအောင်ဖိအားပေးနေသည်။
ဘင်္ဂလီများသည်မြန်မာနိုင်ငံထည်းသို့ သာမကအိန္ဒိယ(အာသံပြည်နယ်)ထည်းသို့ လည်း
(Intruders are shot dead) သော်လည်းမြန်မာကအိန္ဒိယကိုတုပနိုင်သည့်အခြေအနေမရှိပေ။
အငြင်းပွားမှု၌အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခုံရုံးဆုံးဖြတ်ချက်သည်သူတို့ ဘက်ကိုအသာစီးပေး သည်ဟုယူဆကာဒါကာတွင်အောင်ပွဲအခမ်းအနားကလေးတစ်ခုကျင်းပခဲ့သည်။
သူ့ နိုင်ငံတွင်းရှိရိုဟင်ဂျာအမည်ခံသုံးသိန်းကိုမြန်မာကလက်ခံပေးရန်တောင်းဆိုထားသည်။ ၄င်းကိုကြည့်လျှင်မြန်မာနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်ပြော့ပြောင်းလိမ့်မည်ဟုမမျှော်လင့်နိုင်။
ထို့ ကြောင့် “ရိုဟင်ဂျာ” အရေးသည်အမျိုးသားလုံခြုံရေးကိုချိမ်းချောက်မှုဟုဆိုရခြင်းဖြစ်သည်။ အမျိုးသားလုံခြုံရေးကိုချိမ်းချောက်နေသောကိစ္စတစ်ခုသည်ပြည်တွင်းရေးသက်သက်မဟုတ်ပေ။
မူးယစ်ဆေးဝါးပြဿနာ၊ AIDS ပြဿနာ၊အကြမ်းဖက်ဝါဒနှင့်ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်မှု
(Illegal migration, narcotics, AIDS, terrorism, Cybercrime) စသည့်ပြဿနာများ
အကယ်၍သမတကြီးအစိုးရသတ်မှတ်သလို “ရိုဟင်ဂျာ” အရေးသည်ပြည်တွင်းရေးကိစ္စ သက်သက်ဖြစ်လျှင်ယခုသူတို့ ကိုယ်သူတို့“ရို ဟင်ဂျာ”အမည်တပ်နေသူများအား
သမတကြီးကသူတို့ ကိုဘင်္ဂလီများ (ဘင်္ဂလားဒ်ရ်ှမှလာသောနိုင်ငံခြားသားများ)ဟုခေါ်နေပြီး
သူတို့ ဖန်တီးသောပြဿနာကိုတော့ “ပြည်တွင်းရေး”ဟုသတ်မှတ်နေလျှင်
ရှေ့ နောက်ညီညွတ်မှုရှိမည်မဟုတ်ပါ။ (inconsistent)
(sincere and resolute support) ကိုရယူရန်ခက်ပေလိမ့်မည်။
မိမိပြန်ချေမှုံးရာရောက်နေသည့်ရပ်တည်ချက် (a self-defeating attitude) ဖြစ်နေသည်။
အကျိုးထက်အပြစ်ကပိုများကာသုံးမ၀င်တော့သလောက်နီးနီး (almost irrelevant)ဖြစ်နေပြီ။
ထို့ ကြောင့်၎င်းအစားကိုယ့်စီရင်ပိုင်ခွင့် (our jurisdiction)ဆိုတာလောက်ပဲပြောလာကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအဖို့ ၁၉၈၉ ခုနှစ်ကစတင်၍ပြောင်းလဲချမှတ်ခဲ့သော open doorပေါ်လစီကို
မြန်မာနိုင်ငံသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းငါးဆယ်(၁၉၆၂- ၂၀၁၂) အတွင်းပထမ၂၆ နှစ်သည် မိမိဖာသာအထီးကျန်လမ်းကြောင်း (self-isolation) လျှောက်လှမ်းခဲ့၍နောက်၂၄ နှစ်မှာ အနောက်တိုင်းဆန်ရှင်ပိတ်ဆို့ ရေးအောက်မှာနေခဲ့ရကာအားကိုးရလောက်သည့်
အမျိုးသားရေးမာန(national pride) ကလည်းဤအထီးကျန်ဖြစ်မှုကိုဖုံးကွယ်ပေးထားခဲ့သည်။
(Pariah state) ဟုသာအမှန်အတိုင်းသာခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည်။
၁၉၈၉ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတရုပ်ပြည်သူ့ သမတနိုင်ငံကအရေးပေါ်မိတ်ဆွေ
(A friend in need) အဖြစ်ရပ်တည်ပေးခဲ့သော်လည်းအခမဲ့မဟုတ်ဘဲ
အထူးသဖြင့်ကျောက်ဖြူဆိပ်ကမ်းနှင့်ဓါတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်းကြောင့် တရုပ်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုအထိုက်အလျှောက်(ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီတွင်)
ဂျပန်တို့ ကိုအာမခံသလိုအာမခံသူ (security guarantor) မဟုတ်ပေ။
ထို့ ပြင်မြစ်ဆုံဆည်ကိစ္စသည်မြန်မာကတရုပ်ကိုနားရွက်တံတွေးဆွတ်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့သည်။ (ဤကိစ္စကြောင့်အာဏာရပါတီအတွင်းတင်းမာသူအုပ်စုလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်သွားသေးသည်။)
ထိုကာလများအတွင်းမြန်မာ-တရုပ်ဆက်ဆံရေးသည်စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုက အဓိကဖြစ်သော်လည်းမြန်မာနှင့် ASEAN နိုင်ငံများဆက်ဆံရေးသည်
အထီးကျန် ၂၄ နှစ်တာကာလတလျှောက် ASEAN ကအနောက်ဒီမိုကရေစီမီဒီယာများ ၏လှောင်ပြောင်မှုကိုခံလျှက်မြန်မာနှင့် Constructive engagement policy ကို ကျင့်သုံးပေးခဲ့သဖြင့်မြန်မာအဖို့ အသက်ရှုပေါက်ရခဲ့သည်။
ASEAN ခေါင်းဆောင်များအနက်ဆူရင်ပစ်ဆူဝမ်(Surin Pitsuwan) သည်မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်အထူးစေတနာထားသူတစ်ဦးဖြစ်သည်။
ASEAN အုပ်စုတွင်လူဦးရေသန်း ၅၀၀ ရှိသည့်အနက်မူဆလင်ကတ၀က်ကျော်သဖြင့်
မြန်မာပြည်တွင် “ရိုဟင်ဂျာ” ဆိုတာကိုအကြောင်းပြု၍ဘာသာရေးပဋိက္ခဖြစ်မှာ
မလိုလားချေ။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဤကဲ့သို့ သောပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်လာ၍သက်တမ်းကြာ
သွားလျှင်အလာူတူပဋိပက္ခမျိုးရှိပြီးသားထိုင်းနိုင်ငံအပြင်မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှားတို့ အထိ
ကူးစက်ကျယ်ပြန့် လာကာအဖွဲ့ ၏စည်းလုံးညီညွတ်ရေးကိုထိခိုက်မှာစိုးရိမ်ဟန်ရှိသည်။
ထို့ ကြောင့်“ရိုဟင်ဂျာ”ဟူသောခေါင်းစဉ်ဖြင့်ဆွေးနွေးမည်ကိုကန့် ကွက်လိုကကန့် 
ကွက်နိုင်သော်လည်းပြည်တွင်းရေးဖြစ်သည် (ASEAN ပဋိဥာဉ်ကိုချိုးဖေါက်ရာကျသည်) ဟူသောငြင်းပါယ်မှုသည်တွေးခေါ်ပုံလွဲနေသည်(wrong-headed) ဟုထင်ပါသည်။
သေချာသည်မှာဘင်္ဂလီများစိမ့်ဝင်လာခြင်းလူဝင်မှုပြဿနာ (immigration issue သည် အချိန်မှီမဖြေရှင်းနိုင်၍သက်တမ်းရင့်သွားလျှင်မူလရင်းမြစ်ပြဿနာပျောက်ကာ
လူ့ အခွင့်အရေး၊လူသားချင်စာနာရေးပြဿနာ (humanitarian issue) များ
အဖြစ်တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်။ ဤသို့ ဆိုလျှင်လူသား
အရေးဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု (humanitarian intervention)
Posted by Myint Shwe at 11:29 AM0comments
ရခိုင်အရေး လျှော့တွက်လျှင် ခံကြရလိမ့်မည်
Photo credit - Arif Ali - AFP
သြဂုတ်လ ၃ ရက် - ၂၀၁၂
ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်နေ့ စွဲဖြင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုပ်ပြန်ကြေငြာချက်၌ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် အခြေအနေအရပ်ရပ်သည်ပုံမှန်အခြေအနေသို့ ပြန်ရောက်နေပြီဟုနိဂုံးချုပ်၍ဖေါ်ပြထားသည်။ -
(source - EMG Media / The Voice / 7Day news journal)
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ထိုနေ့ တွင်ပင်ပေါက်တောမြို့ နယ်မှနောက်ထပ် ရခိုင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးဈေးမှအပြန်မူဆလင်ရိုဟင်ဂျာသုံးယောက်ကဓါးနှင့် ထောက်၍မုဒိမ်းကျင့်လွှတ်လိုက်ပြန်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာခိုင်လုံသောသတင်းဖြစ်ကာတရားခံများထည်းမှတစ်ဦးကိုပင်ဖမ်းမိထား
သူသွားလာနေကျနေရာများတွင်နိုင်ငံအတွင်းသို့ တရားမ၀င်ရောက်ရှိနေသူများ၏ တစ်မျိုးတစားတည်းသောအမှုဖြင့်ထပ်တလဲလဲကျူးလွန်စော်ကားမှုကိုခံနေရခြင်းသည်
“တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး”ကျဆုံးနေခြင်းမဟုတ်လျှင်တခြားဘာဖြစ်နိုင် သနည်း။ (ဒါတောင်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးရှိနေချိန်ဖြစ်သည်။သို့ မဟုတ်လျှင်ရခိုင်တွေဘ၀မှာတွေးရဲစရာပင်မရှိ)
ဤအဖြစ်မျိုးမြန်မာပြည်သားတွေခံစားခဲ့ကြရဘူးသည်မှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းတိုင်းပြည် ဖက်ဆစ်ဂျပန်တို့လက်အောက်ကျရောက်ချိန် (၁၉၄၁-၄၅) ကသာဖြစ်သည်။ရခိုင်ပြည်သို့ တပ်ရင်းပေါင်း များစွာပို့ ထားပါလျှက်ရိုဟင်ဂျာဆိုသူတွေဘာကြောင့်ဤမျှအတင့်ရဲနေကြသနည်း။
(၁) အုပ်ချုပ်သူအာဏာပိုင်များကရိုဟင်ဂျာဆိုသူများအပေါ် - သူတို့ အကြောင်းနှင့်သူတို့- သက်ညှာနေခြင်း
(၂) UNHCR အပါအ၀င် INGO များကရိုဟင်ဂျာဆိုသူတို့ ဘက်ကရပ်တည်ပေးနေခြင်း။
(၃) နိုင်ငံတကာမှအမျိုးတူဘာသာတူတွေကငွေအင်အား၊ ၀ါဒဖြန့် ချီရေးအားဖြင့်ပံ့ပိုးနေခြင်း
(၄) အစ္စလမ်နိုင်ငံကြီး (OIC) အချို့ ကမြန်မာ အပေါ် သံတမန်ဖိအားပေးများနေသည်ကိုသိကြခြင်း။
(၅) Jihad အဖွဲ့ တွေကမြန်မာပြည်ကိုသူတို့ ၏နောက်ထပ်စစ်မြေပြင် အဖြစ်သတ်မှတ်ချိမ်းချောက်နေခြင်း။
(က) ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံဟုဆိုသော်လည်းလက်တွေ့ အုပ်ချုပ်သူအများစု သည်မြန်မာလူမျိုး
(ဂ) အနောက်တိုင်းစီးပွားရေးပိတ်ဆို့ မှုဆန်ရှင်အောက်တွင်နှစ်ပေါင်းများစွာနေရစဉ်ကမိမိတို့ အားအဘက်
လုပ်၍စီးပွားရေးအရဆက်ဆံခဲ့ သောအစ္စလမ်နိုင်ငံများ (အီရန်၊ ကူဝိတ်၊ ဆော်ဒီအာရေဗျ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊
မလေးရှား၊ ဘရူနိုင်း၊ ယူအေအီး စသောနိုင်ငံများ)အပေါ်မျက်နှာနာနေခြင်း (ယခုအထိထိုနိုင်ငံများသို့ ဆန်၊
သား-ငါး နှင့်အလုပ်သမားများတင်ပို့ နေသေး ခြင်း၊ ထိုနိုင်ငံများမှ - မဆိုစလောက်ငွေကြေးအကူအညီနှင့်
ရင်းနှီးမြှုတ်နှံမှုများကိုလက်ခံထားပြီးဖြစ်နေခြင်း)တို့ ကိုအကြောင်းရင်းများအဖြစ်တွေ့ ရပါလိမ့်မည်။
နှစ်အချက် - တတိယကမ္ဘာရှိကျဆုံးနေသောနိုင်ငံများနှင့်ချိနဲ့ သောနိုင်ငံများ (Failed states / weak
states) တွင်အလုပ်လုပ်နေသောကယ်ဆယ်ရေး (humanitarian) INGO များသည် ၄င်းတို့ ၏လုပ်ငန်း
သဘာဝအရပင် လက်ခံနိုင်ငံ (host country) ၏ဆန္ဒ၊ အမျိုးသားအကျိူးစီးပွားတို့ နှင့်ဆန့် 
ကျင်၍ဆောင်ရွက်ကြရတတ်သည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် NGO များသည်ပဉ္စမံအကြမ်းဖက်သမားများ
ကိုသေချာစွာမစီစစ်ဘဲဝန်ထမ်းခန့် ထားသည်။ (ထို့ ကြောင့်နောင် NGO တွင်ဒေသခံဝန်ထမ်းခန့် လျှင်
အစိုးရထံမှ clearance requirement လိုအပ်သင့်သည်။)
သုံးအချက် - အနောက်နိုင်ငံရောက်ရိုဟင်ဂျာအနွယ်များသည်သူတို့ အရေး (cause) အတွက်လိမ်ညာ
၀ါဒဖြန့် ရန်ဝန်မလေးကြ။ အနောက်တိုင်းသတင်းပရိဿတ်၏အကြိုက်နှင့်အပေါ်ယံကြောကြည့်
တတ်သောအားနည်းချက်ကိုအသုံးချနိုင်စွမ်းရှိကြသည်။ အနောက်နိုင်ငံအခြေချမြန်မာတွေ မယှဉ်ပြိုင်
အကြမ်းဖက်မှုများရခိုင်တွေဘက်ကကျူးလွန်တာတွေလည်းရှိမည်သာဖြစ်သည်။ သို့ သော်နိုင်ငံ
သားတွေဖြစ် နေသဖြင့်တရားဥပဒေဖြင့်မိမိရရ ထိထိရောက်ရောက်နှိပ်ကွပ်နိုင်သည်။
(အစိုးရကလည်းဆန်ရင်းကိုသာနာနာ ဖွတ်လိမ့်မည်။) ရိုဟင်ဂျာကကျူးလွန်၍အရေးယူရလျှင် NGO တွေ
နှင့်နိုင်ငံတကာမီဒီယာကလူ့ အခွင့်အရေး နှင့်ကိုင်ပေါက်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ဝါဒဖြန့် ချီရေးအရအခြား
လေးအချက် - မြန်မာနှင့်သံတမန်ဆက်ဆံရေးသက်တမ်းရင့်အီရန်နိုင်ငံသည်ပင်ရိုဟင်ဂျာအရေး၌မြန်မာ
အပေါ်ဖိအားပေးနေသည်။ ကုလသမဂ္ဂတပ်များစေလွှတ်ခိုင်းနေသည်။ နိုင်ငံပေါင်း ၅၀ ကျော်
ပါဝင်သောအစ္စ လမ်နိုင်ငံများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့(OIC) ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသို့စုံစမ်းရေးအဖွဲ့ 
တစ်ခုစေလွှတ်လိုနေ သည်။ ၄င်းတို့ အထည်းတွင် ASEAN နိုင်ငံများဖြစ်ကြသောမလေးရှားနှင့်
အင်ဒိုနီးရှားနှင့်အိမ်နီးချင်းဘင်္ဂလား ဒက်ရှ် နှင့်ပါကစ္စတန်တို့ လည်း ပါဝင်ကြသည်။
ငါးအချက် - Jihad - ဤအချက်ကရခိုင်ကရိုဟင်ဂျာတွေကိုမြောက်ကြွနေအောင်အဖန်တီးပေး
ဆုံးဖြစ်နေသည်။ အင်ဒိုနီရှားနှင့်ပါကစ္စတန်တို့ ရှိအစွန်းရောက်တွေကမြန်မာနိုင်ငံအပေါ် jihad
jihad နှင့်နဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့မကြုံဘူးသေး သောမြန်မာအစိုးရဘက်ကထိထိရောက်ရောက်ပြင်
ဆင်နေတာမတွေ့ ရသေး။မြန်မာအစိုးရ၏တွေးခေါ်မြော်မြင်ပုံကိုအကဲခပ်ရသည်မှာမိမိဘက်ကဤရွေ့ 
ဤမျှညင်သာစွာကိုင်တွယ်ပေးနေ သဖြင့် Jihad အထိလုပ်စရာအကြောင်း မရှိနိုင်ဟူ၍၄င်း
(မသီတာထွေးအမှုတရားခံ ၂ဦးကိုသေဒဏ်ပေးထားသော်လည်းတကယ်လက်တွေ့ သေဒဏ်မစီရင်) ၊
မိမိနှင့်ဆက်ဆံရေး ရှိနေပြီးသားအစ္စလမ်နိုင်ငံများမှအစိုးရများကိုမိမိတို့ ဘက်ကမည်မျှလောက်
မှားပါလိမ့်မည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ----
တစ် - အစွန်းရောက်တွေခိုအောင်းနေသောအစ္စလမ်နိုင်ငံများမှအစိုးရများသည်ထိုသူများအပေါ်၌သြဇာမ
ညောင်းပါ။ပြောင်းပြန်အားဖြင့်သာ အစွန်းရောက်တွေကသာအစိုးရအဖွဲ့ ဝင်တွေအပေါ်ဖိအားပေးနေ၊သြ
ဇာညောင်းနေကြသည်။ ဤအချက်နှင့်ပါတ်သက်၍ထိုနိုင်ငံများရှိမိမိ၏သံတမန်တွေ (အီဂျစ် -
ဆော်ဒီအာရေးဗျား - အင်ဒိုနီးရှား - အီရန်-ပါကစ္စတန် - စသည်တို့ မှမြန်မာသံရုံးဝန်ထမ်းတွေ ကို)
နှစ် - မြန်မာနိုင်ငံတွင်တိုင်းရင်းသားစာရင်းဝင်ဖြစ်ရေးသည်ပထမခြေလှမ်းဟုဆိုလျှင် - ဘင်္ဂလီ ၇၄%
ရှိပြီးရခိုင် ၆% သာကျန်တော့သောဘူးသီးတောင် - မောင်တောမြို့ နယ် ၂ခုသည်၎င်းတို့အတွက်သီးသန့် 
သည်ဒုတိယခြေလှမ်းဖြစ် လာနိုင်သည်။ပြင်သစ်နှင့်သြစတျေးလျားတို့ မှာသူတို့ 
ဘာသာဝင်တွေအတွက်ရှာရီယာဥပဒေ (Sharia law)ဖြင့်သီးသန့် အုပ်ချုပ်ရန်ဆိုသောတောင်းဆို
အကျယ်အားထုပ်လာနိုင်သည်။ ဘာကြောင့်ဤသို့ တရားလွန်ရန်စနေမည်နည်း။
လည်းသိနေသည်။ ၄င်းတို့ မှာ -
၁ - ထိုအစိုးရ၏၀န်ထမ်းတွေအလွန်လာဘ်စားသည်။အမျိုးသားလုံခြုံရေးစည်းရိုးကြီးမှာကျိုးပေါက်နေသည်။
၂ - အစိုးရသစ်ဆိုသည်မှာစင်စစ်စစ်ယခင်အာဏာရှင်စံနစ်ထည်းကစစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေ
ပင်ဖြစ်ကြ၍ နိုင်ငံတကာအစိုးရများက သံသယ ကြီးစွာဖြင့်ဆက်ဆံတာခံနေကြရသည်။
၃ - တိုင်းရင်းသားဖြစ်ခွင့်၊ သီးသန့် ကိုယ်ပိုင်နယ်မြေတွေမဖြစ်နိုင်လျှင်ပင်ပြ ဿနာကိုသက်တမ်း
ရှည်နေအောင် လုပ်ထားဖို့ လိုမည့်ဒုတိယအကြောင်းရင်းတစ်ခုရှိနေသည်။ ၄င်းမှာမြန်မာနိုင်ငံမှ
နဂိုရှိဧရိယာကျဉ်းရသည့် အထည်းကမ္ဘာကြီးပို၍ပူနွေးလာမှုကြောင့်ပင်လယ်ရေပြင်မြင့်တက် လာသဖြင့်ကမ်းခြေဒေသအဆုံးရှုံးခံရဆုံးနိုင်ငံများထည်းတွင်ရှေ့ ဆုံးတန်းမှာရှိနေသည်။ ဘင်္ဂလားဒက်ရ်ှသည် “နေစရာမြေနေရာ (Lebensraum)” သဘော တရားကိုကိုင်စွဲရတော့မည့် ဘ၀ကိုရောက်နေပြီဟု သူတို့ နိုင်ငံရေးသမားတစ်ချို့ ကပင်ဗြောင်ပြော (ရေးသား) နေကြပြီ။ (ရှိပ်ဟာစီနာ အစိုးရအဖွဲ့ ကမြန်မာဘက်ကသံသယ မရှိအောင်ကိစ္စတစ်ချို့ ဆောင်ရွက်ပြပေမင့်အသုံးမ၀င်ပါ။)
ဘင်္ဂလားဒက်ရ်ှမှထွက်ခွာလာသူများသည် မြန်မာ၊ ထိုင်း၊ မလေးရှားမှသည် သြစတျေးလျှ၊ နယူဇီလန်အထိ၎င်း၊ အနောက်ဘက်ဆော်ဒီ နှင့် UK အထိ ၄င်း၊ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် ဒုက္ခသည်စခန်းများမှတဆင့် USA, Canada, Australia, Norway စသည့် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းလူချမ်းသာနိုင်ငံများအထိ၎င်း နည်းမျိုးစုံသုံး၍သွားနေကြသည်။ ယခုထိုင်းနယ်စပ်ကစခန်းတွေပိတ်တော့မည်ဖြစ်ရာမောင်တောဒေသမှာပြဿနာဖြစ်/ရှိနေမှ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများသို့ ဒုက္ခသည်များအဖြစ်သွားနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းသူတို့ ထည်းမှတစ်ချို့ကိုယ်တိုင်သုံးသပ်တင်ပြထားတာတွေဖတ်ရသည်။
ကမြန်မာနိုင်ငံသားများ၏အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပျက်ပြားနေမှု သည်ကမ္ဘာကျော်ဖြစ်သဖြင့်ဘင်္ဂလီတို့ ၏မြန်မာဘက်ကမ်းမှာတိုင်းပြည်တည်ဘို့စိတ်ကူးသည်လည်းကြာရှည် စွာရှင်သန်နေနိုင်သည်။
အထက်ကသုံးသပ်ပြခဲ့သောအကြောင်းရင်းခံများအရ - ယခုကြုံတွေ့ နေရ
သောရန်စမှုများ (တိုင်းရင်းသူမိန်း ခလေးများကိုဖမ်း၍ဂိုဏ်းဖွဲ့ မုဒိမ်းကျင့်ခြင်း၊
အထူးသဖြင့်သံဃာတော်များကို - ချောင်းမြောင်း၍သေသည်အထိတိုက် ခိုက်ခြင်း) တို့ 
သည်လက်ရှိအရေးယူ ခြင်းများလောက်ဖြင့်ရပ်ဆိုင်းသွား လိမ့်မည်မဟုတ်။
၄င်းတို့ အားလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ များကနောက်ဆုံးတွင်မလွှဲသာမရှောင်သာ
တွင် အကြီးအကျယ်ဝါဒ ဖြန့် တိုက်ပွဲတိုး၍ဆင်လာကြပေဦးမည်။ (ပြဿနာကိုလူနည်းစု-လူများစု
ပဋိပက္ခဟုအပေါ်ယံကြည့်၍သုံးသပ်လိုက်သောအခါ “လူနည်းစု” သည်လည်း တရားဝင်တိုင်းရင်းသားတွေ
ဟုလက်ခံထားသလိုလိုဖြစ်နေသည်။)ထို့ ကြောင့်ရှင်းရှင်းပြောရလျှင်မြန်မာနိုင်ငံသည်သူတို့ 
အတွက်ဘယ်လိုမှအရှုံးမရှိနိုင်သောဘင်္ဂလီနယ်ချဲ့ သမား တို့ ၏ဆင်ကွက်ထည်းသို့ ရောက်နေပြီဟု
(ဘင်္ဂလားဒက်ရ်ှအစိုးရကဆိုလျှင်မြန်မာဘက်တွင်ရှိနေပြီး သားလူရှစ်သိန်းသာမကသူ့ 
ဘက်တွင်ရှိနေသူသုံးသိန်းကိုပါလက်ခံရမည်ဟုတောင်းဆိုနေသည်။) သို့ ဖြစ်၍အချိန်ဆွဲ၍
တုံ့ နှေးနေပါကပို၍ဆိုးလာနိုင်သည်။ ဘယ်လောက်အထိဆိုးနိုင်သနည်း။
မြန်မာအစိုးရ၏အရေးယူမှုများကို ‘လူ့ အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှု’၊ ‘ဗုဒ္ဓဘာသာ
လူများစုကမူဆလင်လူနည်းစု’ အပေါ်အနိုင်ကျင့်မှုအဖြစ်ကာလကြာရှည်စွာ ၀ါဒဖြန့် 
အတာတရပ်ရောက်သောအခါ Jihad လုပ်ဖို့အကြောင်းလုံလောက်လာလိမ့်မည်။
(illegal migration issue) ကိုဘာသာရေးပြဿနာ (religious strife)
ထိုဖြစ်စဉ် (process) အတွင်းသို့ ယခုအချိန်အထိဝင်ပါမလာသေးသောပြည်
တစ်ခုအထိသာထိမ်းထားနိုင်လိမ့်မည်။ မန္တလေးမှ မြန်မာမူဆလင်ငါးဖွဲ့ ၏စုပေါင်းကြေငြာချက်
သည်ဤအားထုပ်မှုမျိုးဖြစ်သည်။ သို့ သော်ရန်ကုန်မှမြန်မာမူဆလင်တွေထံမှမူဘာသံမျှမကြားရ။
သောဝေဒနာကိုခံစားနေရနိုင်သည် (psychologically torn) ။ ရှစ်ဆယ့်ရှစ်မျိုးဆက်တစ်ဦးဖြစ်သော
ကိုမြအေး သည်သူတို့ အားလုံး၏ဝေဒနာကိုကိုယ် စားပြုနေသည်။
(Ko Mya Aye epitomizes their lots. His utterances reveal their pain.)
[9/11 နောက်ပိုင်း USA နှင့်U.K တို့ မှဥပမာများအရ Jihadists များ သည်ပြည်ပကတာလီဘန်တွေ
မဟုတ်ဘဲပြည်တွင်းပေါက်မူဆလင် တွေဖြစ်နေသည်။ အားလုံးနီးပါးသည်တက္ကသိုလ်ပညာတတ်များ၊
တစ်ဦး ဆိုလျှင်US Army မှဒုဗိုလ်မှုးကြီးဖြစ် သည်။]ဤသို့ ထောက်ပြသဖြင့်မြန်မာ
suspect and respect အညီအမျှယှဉ်တွဲ ကျင့်သုံးဘို့ တော့လိုအပ်မည်။
ဖြစ်သင့်သည်မှာနိုင်ငံသားအားလုံးသည်မိမိတို့ မျက်စေ့ရှေ့ မှောက်မှာပင်လူဝင်မှုပြဿနာ
နိုင်ငံတကာအတွေ့ အကြုံများအရ Jihad သည်ဘာသာရေးစစ်ပွဲဖြစ်သဖြင့်ဘာသာရေးပစ်မှတ်များကို
အသုံးချနေခြင်း (commercialization of holy sitesကိုမည်သူမှကန့် ကွက်ရကောင်းမှန်းမသိသေး။)
Jihad ၏အသွင်အပြင်သည်အဓိကအားဖြင့်ပြောက်ကြားစစ်ဖြစ်သည်။အထူးသဖြင့်ပစ်မှတ်ပျော့ (soft
target) ဖြစ်သောအရပ်သားများကိုပို၍တိုက်ခိုက်သည်ဖြစ်၍မြိုပြပြောက်ကျားစစ် (urban guerrilla
warfare) စစ်လည်းဖြစ်သည်။ ထို့ ကြောင့်လူဦးရေထူထပ်သောရန်ကုန်မြို့ လိုနေရာကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
အထပ်များ၍လူစည်ကားသော မောလ်များ၊ ရှော့ပင်းစင်တာများ (Highrise structures)
Jihadist များသည်အယူသည်းများ (fanatics) ဖြစ်ကြသဖြင့်ကိုယ်တိုင်အသေခံ၍တိုက်ခိုက်
သူများ (suicide attackers) ဖြစ်တတ်ကြသလို၊ အ မျိုးသမီးများ၊ခလေးများနှင့်တိရစ္ဆာန်
များကိုပါအသုံးပြုသည်အထိထွေပြားကြသည်။ Jhiad ၏အခြားထင်ရှားသောတိုက်ကွက်များမှာ
လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခြင်း (assassination) ဓါးစာခံဖမ်း၍တောင်းဆို ချက်များတောင်းခြင်း (hostage
taking)တို့ ဖြစ်သည်။ ထို့ ကြောင့်ထင်ရှားသောခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သူဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည်
(ideal hostage - candidate) တစ်ဦး ဖြစ်လာနိုင်သလို၊ ကိုးကွယ်ရာဘာသာပြောင်းထားသူ
ဗီဒီယိုသရုပ်ဆောင် ရဲတိုက်သည် (victim-candidate) တစ်ဦးဖြစ်လာနိုင်သဖြင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်များ
ဒန်ပေါက်ထမင်းဆိုင်၊ လဘက်ရည်ဆိုင်များ၊ အကြောင်းမသိသော 786 ဆိုင်များကိုသတိနှင့်သုံးစွဲဘို့ 
Facebook တွင် ကြိုတင်သတိပေးနေကြပြီဖြစ်သည်။
ယခုတင်ပြချက်များသည်လူအများချောက်ချားအောင်လှန့် နေခြင်းလည်းမဟုတ်။ မိမိတို့ ပယောဂမပါသော်
လည်းမိမိတို့ သာအများဆုံးခံစားရနိုင်ဘွယ်ရှိသောဒုက္ခများ ကိုမည်သို့အနည်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ရေး
သာဖြစ်သည်။ လူထုကိုတပ်လှန့် ခြင်းသည်နည်းမှားလျှင်ပြဿနာကိုပိုဆိုးအောင်လုပ်သလိုလည်း
ဖြစ်နိုင်သည်။သို့ သော်လိုအပ် နေပါကမလုပ်ဘဲထား၍လည်းမဖြစ်ပေ။ ထို့ ကြောင့်သိမ်မွေ့ 
အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းအနေဖြင့်လူစည်ကားရာနေရာတိုင်းတွင် CCTV တပ်ဆင်ခိုင်း သင့်ပြီ။
monitor လုပ်နေသင့်သည်။ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်း၊ ရဲ၊ မီးသတ်၊သူနာပြု အယောင်ဆောင်မှုများရှိ
အခြေအနေသစ်တိုင်းအတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုအသစ်များဖြင့် update လုပ်ရမည်။
USA တွင် 9/11 နောက်ပိုင်းတွင် Homeland Security Department ဖွင့်ခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်အလားတူ 9/11 တစ်ခုဖြစ်သည်အထိစောင့်မနေသင့်ဘဲမိမိတတ်နိုင်သည့်
လူပြိန်းကြိုက်စကားတွေ ပြောနေသည်များရှိသည်။ သမတကြီးကဒီလူတွေကို
တခြားနိုင်ငံတွေပို့ ပစ်ဘို့ ပြောသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည်ဆင်းရဲသောနိုင်ငံဖြစ်ရာမြန်မာနိုင်ငံသို့ ခိုး
ခလေးမွေးတာကလွဲ၍ဘာ human capacity မှမရှိသူများကိုလူသားချင်းစာနာမှု
ထို့ ကြောင့် အခြေ အနေမှာ - ပြောချင်ရာပြောနိုင်သည်၊လုပ်ချင်ရာလုပ်လို့ တော့မရ -
ဆိုသလိုဖြစ်နေလိမ့်မည်။ လူဝန်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန၀န်ကြီးကလည်းရှေ့ နှစ်သန်းခေါင်စာရင်းကောက်
မသီတာထွေးအစော်ကားခံရပြီးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်မှ ၂လအတွင်း ပြဿနာသည် Jihad ဘာသာရေး
စစ်ပွဲ ဆင်နွဲမည်အထိနေရာအတော်များများမှပြိုင်တူချိန်းချောက်လာကြသည် အထိမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီး
ရင့်ကျက် (mature) လာသည်။ ဤသည်မှာအကြောင်း ၂ခုကြောင့်ဤမျှမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရင့်ကျက်
၁) တဘက်ကစီမံကိန်းရှိရှိကြိုတင်အကွက်ချ စတင်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းယခုသက်သေတွေနှင့်
(၂) မြန်မာ အစိုးရဘက်ကအလစ်အငိုက်ခံလိုက်ရသလိုဖြစ်သွားသည့်အပြင်ပြဿနာကို
ရင်ဆိုင်ရာတွင်နဂိုဓါတ်ခံလည်း ညံ့ဖျင်းသည်။ (၀န်ထမ်းလာဘ်စား မှုစသည့်အချက် ၄ ချက်
အထက်တွင်တင်ပြပြီး) မည်သို့ ဖြစ်စေဤအချက်များကိုအကျယ်ချဲ့ မနေတော့ဘဲအောက်ပါအချက် (၇)
ချက်ကိုသာထပ်မံတင်ပြလိုပါသည်။ ပြဿနာကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနေသောနိုင်ငံတကာအတွေ့ 
အကြုံများ(UK, France, Italy, Thailand, Australia) ထည်းမှမြန်မာနိုင်ငံနှင့်သင့်လျှော်
၁- နောက်ထပ်ဘင်္ဂလီတွေခိုးဝင်မလာနိုင်အောင်နယ်စပ်နှင့်ပိုင်နက် ရေပြင်ကိုထိထိမိမိပိတ်ဆို့ ဖို့ 
၂- ရခိုင်ပြည်နယ်အတွက်နယ်ခြားစောင့်တပ်များ - BGF - ဖွဲ့ စည်းပေးပြီး လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရန်
၃- ရှိပြီးသားလူတွေလူဦးရေတိုးနှုံးကျဆင်းလာအောင်တားဆီးရေးထိထိ ရောက်ရောက်လုပ်ဖို့ 
၄ - ရခိုင်လူမျိုးတွေအပေါ်ဖိအားလျှော့အောင်နှင့်/ခိုးဝင်သူများကိုရောနှော လက်ခံမထားနိုင်အောင်
၅ - ခလေးတွေနှင့်လူငယ်တွေကိုပညာသင်ပေး၊ပျိုးထောင်ပေးမည့် ပြည်တွင်းမူဆလင်
၆- နိုင်ငံခြားမှမိသားစုအလိုက်ခေါ်ယူမည့် sponsor များကို NGO/ အစ္စလမ်
၇ - ကျန်သူတွေကိုစီစစ်၍အပြစ်ရှိသူများအားပြစ်ဒဏ်၊ အပြစ်မရှိသူများနိုင်ငံသား ဖြစ်ရေးနှစ်ရှည်သင်တန်း
နိုင်ငံသားဖြစ်နေပြီးလွှတ်တော်တက်နေသည့်ဦးရွှေမောင်လိုလူကိုနောက်ဆုံးကိစ္စ (နံပါတ် (၇)
အချက်) ထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်ရာ၌ထည့်သွင်း ခန့် အပ်တာဝန်ပေးကြည့်သင့်သည်။
အတိုင်း maximum security facility တစ်ခု ကိုးကိုးကျွန်းမှာတည်ဆောက်ဖို့ လိုအပ်ကောင်းလိုလိမ့်မည်။
သက်တမ်း ရင့်ရခိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ တစ်ခုကို လက်တွေ့ လိုအပ်ချက်အရတာဝန်ပေး ထားပုံရသည်။
(ခိုင်စိုးနိုင်အောင် ဦးစီးသည့် Arakan Liberation Party)
တာဝန်ယူကြမှဖြစ်လိမ့်မည်။ ၂၄/၇ အခြေခံဖြင့်မျက်လုံးပေါင်းသန်းချီ၍စောင့်ကြည့်နေမှလုံ လောက်မည်။
ထို့ ကြောင့်လူထုအားလုံခြုံရေးပညာပေးသင်တန်းများလုပ်ရ ပါမည်။ ဥရောပ၊ အစ္စရေး၊ USA
စသောနိုင်ငံများရှိသက်ဆိုင်ရာအေဂျင်စီများ ထံမှလေ့ကျင့်သင်ယူရမည်၊ သတင်းဖလှယ်ရမည်။
အခြေအနေအရမြန်မာနိုင်ငံကသူတို့ ထံမှ အတုမယူသင့်သေးသောတစ်ခုတည်းသောကိစ္စမှာကြိုတင်၍
ချေမှုံးရေး (Preemptive strike option) သာဖြစ် သည်။
ကနမူနာသစ်တစ် ခု (test case) အဖြစ်သဘောထားနေ ကြောင်းသိရသည်။ သို့ ဖြစ်သောကြောင့်
မြန်မာအစိုးရသစ်သည်ဤ new image ကိုထိခိုက်မည့်အရာတိုင်းကိုသတိကြီးကြီးဖြင့်ရင်ဆိုင်ကိုင်
တွယ်နေသည်မှာကောင်းပါ၏။ သို့ သော်၎င်းအတွက်ပေးရမည့်တန်ဘိုးများ ထည်း
တွင်ရာနှင့်ချီမည့်ပြည်သူတို့ ၏အသက်များ၊ အစါးထိုး၍မရနိုင်သောအမျိုးသားယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များ၊
national humiliation တစ်ခုကိုခံစားကြရဘွယ်ဖြစ်နေသည်။ဤချိမ်းချောက်နေမှုကိုအချိန်မှီ
ယွင်းချက်မကင်းသောပြည်ထောင်စုဖွဲ့ စည်းထားပုံစံနစ်ကိုပါကျဆုံးဖို့ ဖြစ်လာစေလိမ့်မည်။
Posted by Myint Shwe at 4:10 PM6comments